ဘုန်းကျော်: ခန့်စည်သူကို ဆန္ဒပြဖို့အတွက် ရဲ..ကိုအကြောင်းကြားပြီ
ခန့်စည်သူကို ဆန္ဒပြဖို့အတွက် ရဲ..ကိုအကြောင်းကြားပြီ
To: Morley Police Station
This is to notify the local police of our intention to protest at the Morley Recreation Centre on the 16th October, 2010.
This protest is in regard to the arrival in Australia ofaBurmese actor with ties to the Burmese military regime. He has starred in many military propaganda movies that hide and deny the well documented oppression and brutality of the regime.
As Australian citizens and former refugees who have fled the oppression in Burma, we wish to exercise our democratic right (a right which is brutally suppressed in Burma) to peacefully protest - we are protesting the role this man has played in propagating mistruths about what is happening in Burma.
If you require any further information or documentation please contact me.
မှတ်ချက်။ ။ ရေးသူ ကိုရစ်ချက်အားအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, September 30, 2010
come on mate .. bring it on ...
make sure u bring alots of people otherwise u get fucked..
ပြည်တွင်းမှာ နအဖ ကလိမ်ကကျစ်ကျတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတာ ကုလားတွေပါ။ ပြည်ပမှာကျတော့ ကုလားတွေက ဒီမိုတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်နေကြပါတယ်။ မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို နအဖ မသင့်မြတ်ဖြစ်နေတာကို ကုလားတွေက နိုင်ငံရေး နေရာရအောင် အကောက်ကြံနေတာ သိသာလွန်းလှပါတယ်။ ပွဲလန့်တုံး ဖျာခင်းနေကြပါတယ်။ ကုလားလိမ် မြအေးက ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး ကုလားတွေအကူအညီနဲ့ လိမ်ညာနေတယ်။ အဲဒီကုလားလိမ်ရဲ့ သမီး ကုလားမက ၅ မိနစ် မိန့်ခွန်းပြောတာနဲ့ နှစ် ၂၀ လုပ်နေတဲ့ သူတွေထက်သာလွန်တယ်ဆိုပြီး ချီးကျူး နေကြတယ်။ ဒီမိုတွေ မတုံးလွန်းဘူးလား ကွယ်?
မြန်မာလူမျိုး ကရင်တွေဆိုရင် DKBA ကို နအဖ နဲ့ ပေါင်းသင်းရမလားဆိုပြီး ရစရာမရှိအောင်ဆဲဆိုနေတာ မြင်နေရပါတယ်။ ကုလားတွေ လူလိုနေတတ်ချင်ရင် မြန်မာလူမျိုး ကရင်တွေရဲ့ သေးကိုသောက်ပြီး ချီးကိုစားပါ။ ဒီမိုဘက်က ကုလားတွေဟာ ပြည်တွင်းမှာ နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ ကုလားအဖွဲ့အစည်းတွေကို လုံးဝမရှုံ့ချကြပါဘူး။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေက ကုလားတွေကို ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာလဲမလုပ်ဘူး။ ဒီမိုကုလားတွေက နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုပဲ ရှုံ့ချနေတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ မရိုးသားဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ ကုလားဦးရေဟာ မြန်မာပြည်မှာ မနည်းပါဘူး။ ဒီမိုမီဒီယာတွေက နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတဲ့ ကုလားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သတင်းကို ဘာကြောင့် ထိမ်ချန်ထားကြတာလဲ? မြန်မာအချင်းချင်း စောက်တင်းပြော စောက်ရန်ဖြစ်တာကို ကုလားတွေက အခွင့်အရေးယူပြီး နိုင်ငံရေးနေရာရအောင် လုပ်နေပါတယ်။ ဒီကောင်တွေနေရာရရင် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံလုပ်ပြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသားရေးသတိရှိကြပါ။
မြင့်မြတ်သည့်မဟာမြန်မာဝါဒီသခင်ကြီး Mr. ★ဆရာဇော်မျိုး★
October 1, 2010 at 1:34 AM
We knew that you are going everywhere to promote about your fathers-in-law who are Kalars.
I know who you are, Mg Zaw Myo!
October 1, 2010 at 5:22 AM
ခန့်စည်သူကို ဆန္ဒပြဖို့အတွက် ရဲ..ကိုအကြောင်းကြားပြီ...